အသင့်သုံး Psd ဖိုင်လေးများ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Web Development Section -2» Photoshop » ဆွေးနွေးချက်များ
အသင့်သုံး Psd ဖိုင်လေးများ
19-11-2008, 04:17 PM
ပို့စ် 45 ခုအတွက် 350 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Wedding DVD cover လုပ်ထားတာလေးကို လေ့လာပြုပြင်အသုံးပြုနိုင်အောင်ပါ ... .......PSD ဖိုင်ဆိုတာကတော့ Photoshop နဲ့ဖန်တီးထားသော ပုံတစ်ပုံ(သို့) ဒီဇိုင်းတစ်ခုခုကို
နောက်တစ်ကြိမ် လွယ်လွယ်ကူကူအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်ရန် Layers တွေကို တစ်ခုထဲမပေါင်းပစ်ပဲ အရှင်လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုပြောတာပါ...မြင်သာအောင်ပြောရရင်တော့ အောက်က
ပုံလေးတွေကို Photoshop မှာပြင်မယ်ဆိုရင် ဒီပုံတွေရဲ့ မိမိပြောင်းချင်တဲ့စာသား ၊ ပုံ ၊ အရောင်တွေကို လွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် မိမိပြောင်းချင်တဲ့ layer မှာ ပြောင်းလဲ
လိုက်ယုံပါပဲ ..ချစ်သူရည်းစားရှိတဲ့ ကိုကို မမတွေဆိုရင် ကိုယ့်မင်္ဂလာဆောင်မှာ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ cover လေးသုံးလို့ရတာပေါ့ဗျာ .....
Wedding cover 1
Wedding cover 2
Wedding cover 3
Last edited by ဇွဲသူရိန်; 23-11-2008 at 02:30 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ ဇွဲသူရိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သတိ, စစ်တွေသားချေ, နီထွန်းဦး, မင်းကိုထွေး, ဟန်မိုးလွင်, မောင်သံသရာ, မောင်မောင်လေး, သော်ဇင်နိုင်, အောင်ကျော်ဆန်း, ၀င်းထွဋ်, နိုင်သူရ, aungzaw, mercury, moe gyi, phoetharlay, zmhtut, zo
Find More Posts by ဇွဲသူရိန်
19-11-2008, 04:23 PM
ပြန်စာ - အသင့်သုံး Psd ဖိုင်လေးများ
ကျေးဇူးပဲ .. အကိုရေ ... အခုလို့ဝေမျှပေးတဲ့ အတွက်..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကိုဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, မောင်ဝေယံထက်, နိုင်သူရ, zo
19-11-2008, 05:13 PM
Wedding VCD/DVD ခွေ cover
နောက်ထပ် Wedding VCD/DVD cover ပါ ... အပေါ်မှာ ရှင်းပြထားသလိုပဲ ပြောင်းလဲ
အသုံပြုနိုင်ပါတယ် .... ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ....မင်္ဂလာဆောင်ရင်လဲ အသိပေးကြအုံးနော်
Wedding VCD cover1
Wedding VCD cover 2
Wedding VCD cover 3
Wedding VCD cover4
Last edited by ဇွဲသူရိန်; 23-11-2008 at 02:33 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ဇွဲသူရိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သတိ, စစ်တွေသားချေ, မောင်သံသရာ, သော်ဇင်နိုင်, နိုင်သူရ, aungzaw, mercury, phoetharlay, zmhtut, zo
23-11-2008, 02:13 AM
တရုတ် DVD cover ဖန်တီးမှုလေးများ
တရုတ် DVD cover ဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲ လေ့လာနိုင်အောင်ပါ .... PSD ( အရှင် ရွှေ့ပြောင်းအစားသွင်းနိုင်သော ) ဖိုင်တွေဖြစ်ပါတယ် ... သူတို့တွေရဲ့ ပုံလေးတွေကို တကယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားသလဲ ဆိုတာတွေ့နိုင်ပါတယ် .... ဖိုင်ဆိုဒ်က နဲနဲလေးကြီးပါတယ် ဒါပေမယ့်လေ့လာသင့်တဲ့ အမျိုးအစားထဲမှာပါတာမို့ တင်ပေးထားတာပါ .... ပျော်ရွှင်ပါစေ.....
Chinese DVD cover (1)
Chinese DVD cover (2)
Chinese DVD cover (3)
Chinese DVD cover (4)
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ ဇွဲသူရိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သတိ, စစ်တွေသားချေ, ဧပရယ်မောင်ကြီး, မောင်သံသရာ, သော်ဇင်နိုင်, နိုင်သူရ, aungzaw, mercury, moe gyi, phoetharlay, rfanquee, zmhtut, zo
ကျွန်တော်က ကာဘာလိုချင်ဘူးဗျ..တခြား အင်္ကျီလေး..တွေ လူပုံလေးတွေ ရောရှိဘူးလားဟင်..
ကျွန်တောက အပြင်းကြီးတယ်လေ...မင်္ဂလာဆောင်ပုံလေးတွေရှိရင်လဲ သိပ်ကောင်းပေါ့..ဟိဟိ...
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇွဲသူရိန်, မောင်သံသရာ, zo
Originally Posted by pyaeမွန်
ပိုတိုရှော့မှာ အသင့်အစားထိုးလို့ရမယ့် အကျီတို့ နက်ကတိုင်တို့ လိုချင်ပါတယ်ရှင့်
အသင့်သုံး အကျီ PSD လေးပါ။
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 17-03-2010 at 12:39 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်မောင်, ဒဿဂီရိ, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, aungzaw, blackNwhite, chitnyimalay, maJunior, mercury, minthumon, moe gyi, phoetharlay, phyomyintthein, pyaeမွန်, rfanquee, sailay, soehtetpaing, thurein, tu tu
ပို့စ် 399 ခုအတွက် 3,050 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အသင့်သုံး အကျီ psd
Man Suits Collection 1
Man Suits Collection 2
Man Suits Collection 3
Man Suits Collection 4
Man Suits Collection 5
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ phyomyintthein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇာနည်မောင်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, bonge, minthumon, rfanquee, sailay, stability09, tu tu, zo, zoard
Find More Posts by phyomyintthein
အသင့်သုံး psd file လေးတွေကို photoshop မှာ ဘယ်လို အသုံးပြုရသလဲ သိချင်ပါတယ်။ tutorial တစ်ခုလောက် ရေးပြပေးပါဦး။
20-12-2009, 02:29 PM
Photoshop Tutorial - How To Use PSD Templates
video tutorial ဖိုင်လေးပါခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဦး, စစ်တွေသားချေ, ဇာနည်မောင်, သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, chitnyimalay, minthumon, phoetharlay, rfanquee, xray
21-12-2009, 04:47 PM
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 42 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - အသင့်သုံး အကျီ psd
အကိုရေ ဒီဖိုင်က file expired ဖြစ်နေပြီဗျာ...
ပြန်တင်လို့ရရင် တင်ပေးပါဦးနော် ...ခုမှ ၀င်ကြည့်မိလို့ပါ...
ဒေါင်းပြီးသား အကိုအစ်မများရှိရင်လဲ ပြန်တင်ပေးကြပါနော်.....
လူမစွမ်းတော့ နတ်ကလဲ ဖာသိဖာသာပေါ့.......:11:
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဇာနည်မောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, rfanquee, stability09
Visit ဇာနည်မောင်'s homepage!
Find More Posts by ဇာနည်မောင်
02-01-2010, 09:49 AM
Originally Posted by ဇာနည်မောင်
အကိုရေ ဒီဖိုင်က file expired ဖြစ်နေပြီဗျာ...ပြန်တင်လို့ရရင် တင်ပေးပါဦးနော် ...ခုမှ ၀င်ကြည့်မိလို့ပါ...ဒေါင်းပြီးသား အကိုအစ်မများရှိရင်လဲ ပြန်တင်ပေးကြပါနော်..... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်......
ကျွန်တော်လည်း ခုမှဝင်ကြည့်မိလို့ ခုပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အပေၞကပုံတွေ စုပေါင်းထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း psd ဖိုင် ၆၄ ဖိုင်ပါပါတယ်။ အောက်မှာယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။
Man Suits Collection
p.s : hj နဲ့ဆက်ပြီး၊ WinRar နဲ့ဖြည်ပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဇာနည်မောင်, နီထွန်းဦး, သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, mercury, rfanquee, stability09
Photoshop & Grapic ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုဒ်လေးမှ ဒေါင်းထား&a
Romantic PSD 8003 \_ Романтические PSD 8003
ဒီ ကောင်လေးကို ဒေါင်းပြီးပြန်တင်ပေးပါဦးလို့ ကိုလေလွင့်လိပ်ပြာ စာချွန်ပို့ပြီး အကူညီတောင်းတာနဲ့
Last edited by Myo Min Zaw; 09-02-2010 at 06:06 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, phoetharlay, rfanquee, stability09
ပြန်စာ - အသင့်သုံး psd ဖိုင်လေးများ
Baby PSD PACK
ဒါလေးကိုတော့ ဒီက ဒေါင်းပြီးပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ
စစ်တွေသားချေ, kaunghtetthu, rfanquee
SPC international. Creative Album Vol. 01-12
ကိုလေလွင့်လိပ်ပြာ အကူညီတောင်းလို့ ဒီမှာပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ
ပို့စ်ရှည့်မှာဆိုးလို့ ဘာတွေပါလဲဆိုတာ မဖေါ်ပြတော့ပါဘူး သိချင်ရင်တော
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဇာနည်မောင်, kyaukphyu, laylwintbutterfly, mercury, moe gyi, stability09, tu tu
15-02-2010, 05:02 AM
Amazing Bride & Groom 8
Amazing Bride & Groom 4
စစ်တွေသားချေ, ဇာနည်မောင်, phoetharlay, rfanquee
16-02-2010, 03:09 PM
ပို့စ် 21 ခုအတွက် 51 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Wedding VCD/DVD ခွေ cover
ိifile နဲ့ တင်*လို့ ရရင်*်ရပန်*တင်*ပေးပာဗ်ယာ....
thank you par
Originally Posted by ဇွဲသူရိန်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ runner.zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သက်နိုင်, minthumon, rfanquee
Find More Posts by runner.zaw
16-02-2010, 04:27 PM
Originally Posted by runner.zaw
ifile နဲ့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အဆင်မပြေတဲ့ လင့်ရှိသေးရင် ထပ်ပြောပါခင်ဗျာ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ဇွဲသူရိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, phoetharlay, runner.zaw
17-03-2010, 05:10 AM
ကို ngwe ရေ ပိုဒ့်နံပါတ် ၆ က လင့်သေနေတာကို ပြောတာလားမသိ။ လင့်ပြင်ထားလိုက်ပါပြီ။ ပိုဒ့် ၁၁ က လင့်တွေကတော့ ကောင်းနေပါသေးတယ်။ ပိုဒ့် ၆ ကအိုင်ဖိုင်လင့်အဆင်မပြေရင် ဒီအောက်မှာ mediafire လင့်နဲ့လည်း သွားယူနိုင်ပါတယ်။
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 17-03-2010 at 12:41 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အခုလိုတင်ထားတဲ့အတွက် download လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့
Find More Posts by kobalay
ပို့စ် 33 ခုအတွက် 147 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုညီနေမင်း site မှာတင်ထားတာက နေခြည်တို့ဆီမှာ ဒေါင်းမရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
ခုတင်ပေးထားတဲ့ psd file အားလုံးရချင်လို့ပါ ကူညီပေးပါအုန်းနော်
- - - - - ငါသည်မပျင်း ဇွဲမာန်တင်းက အောင်မြင်ခြင်းသည် မနက်ဖြန် - - - -
Find More Posts by naychiyoon
31-10-2011, 12:31 AM
မင်္ဂလာဆောင်မောင်နှံ သတို့သမီး သတို့သား မျက်နှာ ဖောက်စွပ်ပုံလေးတွေ ရှိရင် တင်ပေးကြပါလား...
psd နဲ့ မရဘူးဆိုရင်လည်း ရိုးရိုး ပုံတွေပဲ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံ ပုံလေးတွေ လိုချင်လို့ပါ...
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ငြိမ်းချမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
31-10-2011, 01:32 PM
ကျွန်တော်လိုချင်တာက ဖိတ်စာအတွင်းပိုင်းမှာ အလှဆင်တဲ့ icon လေးတွေဗျ။ ဥပမာ။ ။ နေ့စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ၊ လမ်းညွှန် စတဲ့ icon လေးတွေနဲ့ နေရာလွတ်တွေမှာထည့်လိုရမယ့်ပုံလေးတွေ လိုချင်တာခင်ဗျ။ လှလှလေးတွေလေ။ ဆိုင်ကဟာတွေက ပုံတုန်းတွေဖြစ်နေလို့။ အဆင်ပြေရင် ကူညီပေးကြပါဦး။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ AZM အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-12-2011, 12:08 AM
ပို့စ် 154 ခုအတွက် 764 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
သူငယ်ချင်းတို့ရေ .....ရှိတယ်ဆိုရင် မြန်မာသတို့သားသတို့သမီးဝတ်စုံပြည့်များ ဖိုတိုရှော့ဖိုင်နဲ့သိမ်းထားတာများကိုအရမ်းလိုအပ်နေပါတယ် ။ မင်္ဂလာဝတ်စုံတွေအပြင် တခြား ဖိုတိုရှော့ဖြတ်ညှပ်လုပ်စရာ ၀တ်စုံများတင်ပေးကြပါလားခင်ဗျာ ။
[COLOR="Blue"][I][SIZE="4"]အလှဆုံးအပြုံးလေးများ နူးညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာ ချစ်သမီးလေးအမြဲတမ်းသိမ်းပိုက်ခွင့်ရစေသား[/SIZE][/I][/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ပုထုဇဉ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ပုထုဇဉ်
ပို့စ် 272 ခုအတွက် 1,234 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Psd ဖိုင်နဲ့ဆေ့ခ်ျထားသောမင်္ဂလာဝတ်ƚ
မြန်မာသတို့သားသတို့သမီးဝတ်စုံပြည့်များ ကတော့ မသိဘူး..
အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံတွေတော့ ဒီနေရာမှာ ကိုပဲခူးသား ညွန်ပြထားတာရှိတယ်...
အားမပျော့နှင့်၊ မလျော့လုံ့ လ
ဤမြေဤရွာ ဘယ်သူ့ ရွာလဲ
ထားလော့တာဝန်၊ ဉာဏ်ရှေ့ ပန်း၍
(ဆရာဇော်ဂျီ ၁၉၃၅ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး မရခင်)
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ $ညိုမင်းလွင်$ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပုထုဇဉ်, ဖယောင်း, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဦးသာကြီး, မောင်သံသရာ, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), bagothar85, g00gle, maJunior, tu tu
Find More Posts by $ညိုမင်းလွင်$
28-12-2011, 09:23 PM
Last edited by ငြိမ်းချမ်း; 28-12-2011 at 09:24 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဖယောင်း, ကျော်တိုး, ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an), bagothar85, moe gyi, putty
29-12-2011, 01:01 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, နီထွန်းဦး, ပုထုဇဉ်, သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, bagothar85
PSD Calendar 2012 withaPen Stand
ဆိုက်က 1oomb လောက်တွေပါဘဲ..
၅ မျိုးပါ ပါတယ်..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ $ညိုမင်းလွင်$ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပုထုဇဉ်, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, tu tu
17-01-2012, 08:35 PM
ဆံပင်ပုံစံလေးတွေ အတော်စုံတယ်..ဖိုင်ဆိုက်ကတော့ 539MB ရှိပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ $ညိုမင်းလွင်$ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, မောင်သံသရာ, bagothar85
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 10 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကိုရေ လင်ခ်သေသွားလို့ ပြန်တင်ပေးပါဦးနော်.. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
Find More Posts by myintmyat
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 07:25 PM